Muka zuva rega rega uye uve nekutenda nekuda kwehupenyu. - Anotungamira - Quotes Pedia
Muka zuva rega rega uye utende nehupenyu. - Asingazivikanwe
Muka zuva rega rega uye utende pane zvese zvaunazvo. Izvo zvinotaurwa nenzira kwayo kuti hatimbofa takaonga zvinhu zvatiinazvo kusvikira uye kunze kwekunge isu tichiguma tava kurasikirwa nazvo.
Izvo zvakakosha kuti unzwisise kuti hupenyu hausi hwekugunun'una zvinhu zvausina, zviri pamusoro pekunzwa zvakanaka uye kuyedza kuwana mufaro mune zvese zvauinazvo kare.
Tenda Mwari nezvose zvaunazvo!
Ziva kuti iwe unogona kusakwanisa kubata kukosha kwazvo izvozvi, asi kana ukangobvunza mumwe munhu asina izvozvo, iwe unozogona kusarudza fuma yauinayo!
Panzvimbo pekunyunyuta nezve zvinhu zviri kushaikwa muhupenyu hwako, edza kutarisa kwakatenderedza zvinhu zvaunazvo!
Iwe unozogona kuwana kuti kune zvakawanda zvinhu izvo zvaunofanira kutenda nazvo!
Iwe unofanirwa kufara kuva nemhuri yakanaka kudaro, denderedzwa rinoshamisa revezera, ingave iri basa kana nzvimbo yekufundira, chikafu chakanaka, imba inotapira, uye zvese izvo iwe zvausina kumbofunga nezvazvo pakutanga.
Unofanira kuziva izvozvo hupenyu hwakakupa iwe nezvinhu zvakawanda zvinoshamisa. Zvese zvaunoda kutora nguva uye kuyedza kuzvikoshesa uye unozozvinzwa iwe kuti uve nerombo rakaringana! Vimba neni, iwe uchada!
Iva Anokutenda Quotes
Yakanaka Yemangwanani Quotes
Kuva Anotonga Quotes Uye Kutaura
Kwakanaka Kwemangwanani Kwakanaka Quotes
Kwakanaka Mangwanani Quotes
Hupenyu Quotes Mazwi
Rarama Zuva roga roga Senge Rako Rokupedzisira Quotes
Ita Zuva Nezuva Rako Nyanzvi Yemakoto Quotes
Quotes On Kutenda
Kutenda Uye Makomborero Quotes
Kutenda Uye Kuonga Quotes
Tinotenda Zvese Quotes
Kutenda Kune Hupenyu Quotes
Kutenda Quotes Mifananidzo
Kutenda Quotes Kuna Mwari
Kutenda Quotes Kuna Mwari Kune Maropafadzo Ake
Kuenda pakati nepakati hakusviki iwe kwese. Enda munzira yese kana kusaenda zvachose. - Asingazivikanwe
Kana iwe uri kuronga yako chinangwa, iwe unofanirwa kuenda nekuzvipira kuzere. Kana usiri…
Iva sezuva. Ramba uchipenya uye rega zvitsve. - Asingazivikanwe
Muchirongwa chedu chezuva, Zuva rinoonekwa seriri pakati nemapuraneti ese uye…
Hupenyu mudzidzisi mukuru zvekuti kana iwe ukasadzidza chidzidzo, Chinozvidzokorora. - Asingazivikanwe
Hupenyu mudzidzisi mukuru zvekuti kana iwe ukasadzidza chidzidzo, zvaigona kuzvidzokorora ...
Kusurukirwa hakubvi pakuva wega; zvinouya nekunzwa kuti hapana munhu ane hanya nazvo. - Asingazivikanwe
Kusurukirwa hakubvi pakuva wega; zvinouya nekunzwa kuti hapana munhu ane hanya nazvo. - Asingazivikanwe Akabatana Akabatana:
Kukundikana zvachose kunowanikwa chete kune avo vanorega. Handiregi. - Asingazivikanwe
Kukundikana ndipo paunomira kuyedza! Hongu, zvakakosha kuti unzwisise kuti kubudirira hakuuyi kunaani zvake…